काम गर्न सकिनँ भने प्रचण्डको छोरी भन्दैमा नेतृत्व पाइन्न : रेनु दाहाल [अन्तर्वार्ता]
देशका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये एक मात्र महिला प्रमुख रहेको चितवनको भरतपुर महानगपालिका नै हो । ती प्रमुख हुन् रेनु दाहाल । राजनीतिक घरानाकी सदस्य भएकाले उम्मेदवार बन्दादेखि नै रेनु चर्चामा थिइन् । मेयर निर्वाचित भएपछि गरेका कामका कारण रेनुको प्रशंसा भइरहेको छ । सेवाग्राहीको गुनासो सुनिसकेपछि नगरपालिकाले गरेको कामको अनुगमनमा निस्कनुअगाडि मेयर दाहालसँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश:
मेयर बन्नुअघि चुनावको समयमा के प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो र अहिलेसम्म के काम गर्नुभयो ?
हामी मुलुकको सन्दर्भमा नयाँ परिवेश र परिवर्तनको नयाँ संघारमा प्रवेश गर्दैछौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले अहिले काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार जनतासँंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तहगत संरचना निकाय पनि हो ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका देशकै केन्द्रभागमा छ । भौगोलिक हिसाबले र सम्भावनाका हिसाबले पनि असाध्यै प्रचुर छ । खाली जमीन प्रशस्त छ, कृषिको क्षेत्रमा त्यत्तिकै सम्भावना छ । पर्यटनको क्षेत्रमा सम्भावना छ, शिक्षाको क्षेत्रमा शैक्षिक हब र मेडिकल सिटीको रूपमा परिचित छ । पूर्वाधारको हिसाबले पनि खाली जमीनमा हरियाली छ । जे गरौं भनेपनि एउटा काँचो माटोको रूपमा भरतपुर महानगरपालिका छ ।
दुईतिर विशाल नदीहरू छन् । नारायणी नदी एकातिर छ, राप्ती नदी अर्कोतिर छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज छ । धार्मिक पर्यटकीय स्थल छ, देवघाटधाम । प्रदेश र देशकै राजधानी बनाउन पुग्ने संरचना छन् यहाँ । यी सबै कुरा हेर्दा यसलाई देशको नमूना सिटी र व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, त्यो मैले गर्छु भनेर जनताको बीचमा प्रतिबद्धता जनाएकी थिएँ ।
त्यही प्रतिबद्धताअनुसार मैले झण्डै १५ महिना पूरा गरें । यसबीचमा धेरै काम भएको भरतपुर महानगरमा भएको छ ।
भोलि देशकै वैकल्पिक राजधानीको रूपमा भरतपुर हुन सक्छ । चितवन जिल्लालाई प्रदेशको राजधानी बनाउँदा राम्रो हुन्छ । अहिले चर्चामा रहेका ठाउँ साँघुरा छन् ।
जनतामा आशा जागेको छ र विश्वास बढेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले जनताको भावना, चाहना, अपेक्षा र मागअनुसार काम गरेको छ भन्ने कुराको सन्तुष्टि छ शायद जनतालाई । शतप्रतिशत त म भन्दिनँ । चित्त बुझाउने हुन्छ नि, त्यसखालको सन्तुष्टि जनतालाई पनि छ, विश्वास पनि गरिरहनुभएको छ । पन्ध्र महिनाको अवधिमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम भएको छ ।
गाउँमा विकास भन्ने पहिलो आधार सडक नै हो भन्ने छ, त्यसैले प्राथमिकतामा सडक छ । महानगरपालिकाको स्थानीय बजेटबाट मात्र हामीले ९५ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्‍यौं, एक वर्षमा । केन्द्रीय बजेटबाट अलग्गै छँदैछ । रिङ रोड र लिंक रोडका कुरा अनि लामा सडकहरू शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत पनि गरिरहेका छौं ।
स्थानीय बजेटको सदुपयोग गरेर सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी जनताको भावनाअनुसार काम अगाडि बढाएका छौं । अहिलेसम्म भरतपुर महानगरपालिकाको काम भएन भनेर निराशा बेहोर्नुपरेको छैन ।
जनताको काममा कति समय दिनुभएको छ ?
म त बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म जनताको काममै व्यस्त हुन्छु । १० बजे कार्यालय आउनु अगाडिसम्म घरमै भेट्न आउनुभएको हुन्छ । यहाँ कार्यालयमा भेट्न समय कुर्नुपर्ने र घरमा सहज हुने भएकोले त्यहाँ आउनुहुन्छ । १० बजे कार्यालयमा आएर जनताका माग र गुनासो सुन्छु । दिउँसो ३ बजेपछि महानगरपालिकाले गरेका कामको गुणस्तर के कस्तो छ भनेर कर्मचारीसहित फील्ड अनुगमनमा लागि जान्छौं ।
महानगरपालिकाले गरेका कामको गुणस्तरको विषयमा सूक्ष्म ढंगले अनुगमन गरिरहेका छौं । महानगरमा भएका सबै सडकको गुणस्तर एकै किसिमको हुन्छ । शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रको सडकको गुणस्तर एउटै हुनुपर्छ भन्ने धारणा अनुसार चेक जाँच गर्न हामी आफैं फील्डमा गइरहेका छौं । व्यवस्थित ढंगले काम भइरहेको छ ।
तपाईं पहिला सांसद भएर मेयर बन्नुभयो । सांसद बनेर काम गर्न सजिलो कि मेयर बनेर ?
सांसदको भूमिका खासै सक्रिय थिएन । पदीय मर्यादा र सम्मानको हिसाबले मेयरभन्दा माथि भएपनि कामको हिसाबले सांसद भनेको निष्क्रिय पद रहेछ । संसद्को बैठकमा गयो, बोल्न मन लागे बोल्यो, बोल्न मन नलागे नबोल्यो, गएपनि भयो नगएपनि भयो, कसैले किन आएन भन्नेपनि छैन त्यहाँनेर ।
यस्तो खालको निष्क्रिय पद, कुनै उत्तरदायित्व नभएको जस्तो आरामदायी पद । तर यो भनेको एकछिन पनि आँखा झिम्काउन नपाइने, जनताको प्रत्यक्ष खबरदारी र निगरानीमा सेवा र जनतालाई सन्तुष्टि बनाउने र जनतालाई विश्वास दिलाउने कि नदिलाउने भन्ने कुराको प्रत्यक्ष हुने हुँदा एकखालको खबरदारी र काम गर्न त कठिन छ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुनुपर्ने, हरेक खालको क्षेत्र र तप्कासँग फेस गर्नुपर्ने, समाधान र नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हुँदाखेरी असाध्यै चूनौतीपूर्ण, गाह्रो र संघर्षपूर्ण छ । तर संघर्षपछिको आनन्द हुन्छ नि, जस्तो आमालाई बच्चा जन्माउँदाको पीडा हुन्छ, बच्चा जन्माइसकेपछि कस्तो खुशी हुन्छ । त्यस्तै काम एकदमै चुनौतीपूर्ण छ, खट्नुपर्छ, मरिमेटेर लाग्नुपर्छ । जनताका काममा जुटेकाले आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ ।
सांसदको तुलनामा कामका हिसाबले यहीँ आनन्द आइरहेको छ ।
चुनावको समयमा एउटा गठबन्धन थियो । अहिले समीकरण बदलिएको छ । काम गर्न केही अप्ठेरो भएको छ कि छैन ?
मलाई कुनै अप्ठेरो भएको छैन, सहज नै छ । हिजो चुनावमा नेपाली कांग्रेस र पूर्व माओवादी केन्द्र गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थियौं । चुनावमा जीत पनि हासिल भयो । त्यस सँगसँगै मेरा प्रतिस्पर्धी तत्कालीन एमालेका देवी ज्ञवाली र तत्कालीन राप्रपाका बद्री तिमल्सिना हुनुहुन्थ्यो । अहिले हामी तीनैजना एउटै पार्टीमा छौं । मेयरका तीनैजना प्रत्यासी एउटै पार्टीमा छौं ।
स्थानीय स्रोतसाधनले एक वर्षमा ९५ किमी बाटो त महानगरको बजेटबाट कालोपत्रे गर्‍यौं । विगत वर्षहरूमा चार किलोमिटर पनि कालोपत्रे भएको थिएन ।
म कांग्रेसको पनि उम्मेदवार थिएँ । प्रतिपक्षको कुरा गर्दा रेनु दाहाललाई चुनावमा जिताउनको लागि उहाँहरू मरेर लाग्नुभयो । रेनुप्रति लगानी र योगदान पनि छ । जे जस्तो भएपनि मैले उहाँहरूलाई नजरअन्दाज गरेर गएको भए सहयोग हुन्थेन होला । मैले पनि सबैसँग सहकार्य गरेर सन्तुलित ढंगले सबैको चित्त बुझाएर र सबैसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउँदा सबैैको सहयोग पाएको छु र विश्वास पनि पाएको छु ।
अहिलेसम्म काम गर्न मैले कुनै कठिनाइ महसूस गरेको छैन ।
जनप्रतिनिधिहरू जनताको काम छाडेर सुखसयल र विदेश भ्रमणमा हिँडेको गुनासो छ । अन्य महानगरपलिकासँग तुलना गर्दा कामको हिसाबले तपाईंको महानगर कतिऔं स्थानमा होला ?
म जनताको साथमा रहेर जनताको सेवामा काम गरिरहेकी छु । मलाई विदेश भ्रमणमा जाने कुनै रहर छैन । सबभन्दा ठूलो प्राथमिकता र मेरो दायित्व जनताको सेवा गर्नु नै हो भन्ने ठानेकी छु ।
विदेश भ्रमणको अफर आइरहेको हुन्छ । कहिले कर्मचारीलाई, कहिले जनप्रतिनिधिलाई रोटेसनमा आलोपालो गरेर पठाइरहेकी छु । खासखास ठाउँमा जानैपर्ने ठाउँमा मात्र म गइरहेकी छु । अरू खालका विदेश भ्रमण्मा धेरै रुचि छैन ।
मेयर विदेश भ्रमणमा हिँडेर यहाँ काम बिग्रने र लथालिंग हुने स्थिति आयो भने भ्रमण गरेको के मजा भयो त ? म दाबाका साथ भन्छु, अरू महानगर भन्दा म अगाडि छु । म पछाडि छैन ।
के कारणले अरूभन्दा अगाडि ?
मेरो इमान्दारी छ, लगनशीलता छ, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व छ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर एकदमै प्रतिबद्धता र इमान्दारिताले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेकी छु । ममा भएको क्षमतालाई भरमग्दुर प्रयोग गरिरहेकी छु । काम नगरेको भए दिनभर जनतासँग भेटघाट गर्दिनथें होला । जनताले पनि भेट्न नपाएको गुनासो सुन्न परेको छैन । जतिबेला जहाँ आएपनि म सहज ढंगले उपलब्ध हुन्छु ।
स्मार्ट सिटीको कुरा गरेपनि भरतपुर पनि अन्य शहर जस्तै फोहरी र अव्यवस्थित छ भन्ने स्थानीयको गुनासो सुनियो नि !
भरतपुर महानगरको बजारक्षेत्रमा त्यहाँको बजार व्यवस्थापन, फूटपाथ व्यवस्थापन गरेका छौं । अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर पनि व्यवस्थित गरेका छौं । सडकछेउमा असरल्ल पार्किङ देख्नु हुन्न ।
यातायात जोखिमलाई ध्यानमा राखेर तीन पांग्रे सवारीसाधनलाई राजमार्गमा निषेध गरेका छौं । विशेष बजारको व्यवस्थापनका लागि फूटपाथ हटाउने र पार्किङ व्यवस्थित गर्ने काम गरेका छौं ।
शहरी क्षेत्रको सडक पुल्चोकदेखि गोन्द्राङ सडकलाई ६ लेनको बनाउने काम अगाडि बढेको छ । बजार क्षेत्र पहिलाभन्दा धेरै व्यवस्थित भएको छ । चाडबाडको समयमा कर्मचारी नआएर केही समस्या देखिएको भएपनि सफाइमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं ।
समग्रमा शहरी क्षेत्रको व्यवस्थापन र ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पूर्वाधारमा ध्यान दिएका छौं ।
महानगरको विकास भन्दा पनि प्रचण्डको चुनाव क्षेत्रलाई मजबूत बनाउन बजेट खनाएको आरोप छ नि !
त्यो त हो नि । उहाँको पनि निर्वाचन क्षेत्र हो, मेरो पनि क्षेत्र हो । हामी दुवैको जोडबल र सक्रियताले काम गरेको छ । उहाँ राष्ट्रिय स्तरको नेता । चितवनको विकासमा उहाँको सहयोग छैन भनेर कसैले अस्वीकार गर्ने कुरा छैन ।
केन्द्रीय बजेट ल्याउन चितवन क्षेत्र नम्बर ३ को सांसदको हैसियतले उहाँको सक्रियता र भूमिका छ । तर यहाँको आवश्यकता र प्राथमिकता के हो के गर्ने हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं । सोहीअनुसार मन्त्रालयमा प्रपोजल बनाएर फाइल पठाउने काम गरिरहेका छौं ।
प्रचण्डले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट खनाएर विकास भयो भन्ने पनि आरोप छ नि !
स्थानीय स्रोतसाधनले एक वर्षमा ९५ किमी बाटो त महानगरको बजेटबाट कालोपत्रे गर्‍यौं । विगत वर्षहरूमा चार किलोमिटर पनि कालोपत्रे भएको थिएन । हिजोका दिनमा हुने गरेका बेथिती र त्यस खालका कामलाई अहिले पूरै नियन्त्रण गरिएको छ – पारदर्शिताको हिसाब र बजेटलाई सदुपयोग गर्ने हिसाबले पनि । कही त्यस्तो दायाँबायाँ भएको छैन । त्यसले गर्दा धेरै काम गर्न सकेका छौं ।
चुनावी सभामा प्रचण्डले रेनु दाहाललाई प्रचण्डकी छोरी भन्दा अन्याय हुन्छ भन्नुभएको थियो । प्रचण्डकी छोरी भएर कि तपाईंको आफ्नै क्षमताले काम गर्नु भएको छ ?
कस्तो भने, जो पनि कसै न कसैका छोराछोरी त हुन्छन् नै । बाआमा सबैका हुन्छन् । हो, मेरो बुवा राष्ट्रिय राजनीतिमा हिजो मुलुकको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा सफल नेतृत्व प्रदान गरेर आउनुभयो । शान्ति प्रक्रियामा पनि त्यस्तै नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री र दोस्रोपटक पनि सफल प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिले पनि चितवन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित हुनुभएको छ । म गर्व गर्छु उहाँको छोरी हुनमा । मेरो लागि अवसर पनि हो यो । तर चुनौती पनि छ ।
मैले गरेका हरेक काम, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक जे भएपनि, बुवाको नामबाट ल्याएर जोड्दिने परिपाटी मलाई चित्त बुझ्दैन । नराम्रो काम भएमा खबरदारी गर्न पाइन्छ ।
गएको चुनावमा पनि प्रचण्डले आफ्नो छोरी ल्यायो बाहेक अरू रेनुको बारेमा केही छैन के टीकाटिप्पणी पनि ! रेनुको यस कारणले क्षमता छैन भनेर मलाई प्रहार गरे भयो नि । खालि बुवाको नाम जोडदिने र प्रचण्डले आफ्नो छोरी ल्यायो भन्नेबाहेक मेरो बारेमा चुनावी अवधिमा त्यस्तो कुरा सुन्न आएनन् । अहिले पनि त्यस्तै छ ।
हिजो युद्धकालीन परिवेशमा सारा कुरा छाडेर, पढ्दापढ्दैको युवा अवस्थामा जनयुद्धमा होमिइयो । युवा पनि होइन, बाल्यकाल भनौं अझै । पढाइ छाडेर जनयुद्धमा होमिइयो, क्रान्तिमा होमिइयो ।
रोल्पा जस्तो जिल्लाको पार्टीको सहइन्चार्ज भइयो, काठमाडौंको पार्टीको सचिव भयो, महिला संघ, अनेमसंघ क्रान्तिकारीको महासचिव भइयो, पहिलो संविधानसभामा सदस्य भइयो । सबै काम गर्दा प्रचण्डको छोरी कहाँनेर अयोग्य भई त ? अयोग्य यहाँनेर भनिदिनुपर्‍यो नि त । भन्नका लागि भनिएका हुन्, त्यसमा पनि केही वास्ता छैन फेरि, किनभने मैले जनताको पक्षमा काम गरेकी छु ।
इमान्दारिताका साथ काम गरेकी छु, बेइमानी गरेको छैन । जनता र राष्ट्रको सेवामा जुटिरहेकी छु । विगतदेखि अहिलेसम्म ठीक गरेकी छु भन्ने कुरामा म ढुक्क छु । आफू ठीक भएपछि यस्ता टीकाटिप्पणीले फरक पर्दैन । भगवान विष्णुको पनि आलोचना हुन्थे भनेपछि हामी सामान्य मानिस हौं । प्रचण्डको नाम जोडेर हुने टिप्पणीलाई काम र व्यवहारले खाइदिने मेरो प्रतिबद्धता छ । बोलीले खण्डन गर्ने भन्दा पनि व्यवहारले जितेपछि मान्छे छर्लंग हुन्छ ।
यही क्षेत्रमा प्रचण्डले चुनाव लड्ने र यहीँ तपाईं मेयरमा चुनाव लड्ने । प्रचण्ड परिवारको राजनीतिक उत्तराधिकारीको रूपमा तपाईंलाई अगाडि सार्न खोजेको भनेर टिप्पणी सुनिन्छ नि !
म मान्दिनँ त्यस्तो कुरालाई । हामी पारिवारिक विरासत भन्दा पनि एउटा आवश्यकताले नेतृत्व लिने हो । काम गर्दै जाँदा, जनता, राष्ट्र र मुलुकको पक्षमा काम गर्दै जाँदा त्यस्तो स्थिति आउँछ र समयले माग गर्‍यो भने हुने कुरा हो ।
अहिले नै प्रचण्डले अगाडि सारेर म बन्ने भन्ने कुरा हुन्न । कसैले कसैलाई अगाडि सारेर बन्ने कुरा होइन नि त । कसैले भनेर र सोचेर हुने कुरा होइन नि । अहिलेदेखि बुवाले छोरीलाई अगाडि बढाउँछु, भोलिको उत्तराधिकारी हो भन्ने सोचेर मात्र भयो र मैले त्यसअनुसार काम गरिनँ भने ? बुवाले मात्र सोचेर भएन नि । जनताको मन जित्न सकिनँ, समग्र आवश्यकताको क्षमता राखिनँ भने बुवाले चाहेर मात्र पनि त भएन नि ।
हामी पारिवारिक विरासत भन्दा पनि एउटा आवश्यकताले नेतृत्व लिने हो । काम गर्दै जाँदा, जनता, राष्ट्र र मुलुकको पक्षमा काम गर्दै जाँदा त्यस्तो स्थिति आउँछ र समयले माग गर्‍यो भने हुने कुरा हो ।
मुख्य त जनता र मुलुकको आवश्यकता हो । त्यसअनुसार हामी इमान्दारिता साथ काम गर्दै जाँदा भोलि त्यो आवश्यकता भयो भने जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्ने कुरा पनि हुँदैन । परिस्थिति के हुन्छ त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने हो ।
अहिले नै त्यस्तो सोच राखेर अगाडि बढ्ने मानसिकता छैन । काम गर्दै जाँदा खारिएर अगाडि बढ्दा त्यसखालको परिवेश बन्यो, आवश्यकता भयो र त्यो स्थिति आयो भने त्यसबाट पछि हट्ने कुरा त हुँदैन होला । तर अहिले नै म यो बन्छु भनेर सोचेर हुने कुरा होइन । मैले व्यक्तिगत फाइदा र निजी स्वार्थ नसोची काम गर्दै जाने हो । मैले इमान्दारीसाथ काम गरेको छु ।
अन्तिममा, प्रदेश ३ को राजधानीको खोजी भइरहेको समयमा भरतपुरको दाबी छ कि छैन ?
केही समयअघि ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी सिफारिश गर्न गठित संसदीय समिति स्थलगत अवलोकनका लागि आएको थियो ।
हामीले चितवन उपयुक्त छ भन्दै आएका छौं । सबै हिसाबले यसको सम्भावना छ । भोलि देशकै वैकल्पिक राजधानीको रूपमा भरतपुर हुन सक्छ । पूर्वाधारको हिसाबले पनि सम्भावना छ । यस ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बन्नका लागि प्रचुर सम्भावना छन् । सरकारी कार्यालय राख्नका लागि, भौतिक संरचनाका हिसाबले सबै कुरा छन् । कमी केही छैन ।
चितवन जिल्लालाई प्रदेशको राजधानी बनाउँदा राम्रो हुन्छ । त्यतिबेला पनि सुझाव दिएको हो र अहिले पनि सुझाव दिन चाहन्छु । अहिले चर्चामा रहेका ठाउँ साँघुरा छन् ।
जताततैबाट सडक जोडिने भएकाले प्रदेश ३ को राजधानी चितवन राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।